၅၃ ကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီ ဆုပေးပွဲ နှင့် ချစ်သူများ နေ့ ဖက်ရှင်(Beta) | Freedom News Group
၅၃ ကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီ ဆုပေးပွဲ နှင့် ချစ်သူများ နေ့ ဖက်ရှင်(Beta)
by FNG on February 14, 2011	And the GRAMMY goes to.……………..
L I V E from NCN Broadcasting System
ဂရမ်မီ ဆုပေး ပွဲ သို့ အဆန်းထွင် ၍ လေဒီဂါဂါ တက်ရောက်
ချစ်သူများ နေ့ အထူးဈေးရောင်းပွဲ များ ကို အမေရိကန် နာမည်ကျော် Fashion Mall များတွင် လည်းကျင်းပ သင်ချစ်သူ ဆီ က ချိုမြမြ အချစ်တွေ ရဖို့ ဆိုရင် ဒီလို ပိုက်ဆံ အိတ်လေးတွေ ၀ယ်ပေးဖို့ မမေ့ နဲ့တစ်လုံး ကို ဒေါ်လာ နှစ်ရာ ကျော်လေး ပဲရှိတယ် သင့်ချစ် သူကောင်မလေး က အရပ်ရှည်တယ် စကတ်တိုတိုလေးတွေ ၀တ်တယ် ဆိုရင် အခုခောတ်စား နေတဲ့ ဒေါက်တာ မာတင် ဖိနပ်တစ်ရံလောက် ၀ယ်ပေးလိုက် သူတို့ လည်း ချစ်သူများ နေ့ အကြိူလှုပ်ရှားမှု ပြုတယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ပုံ မရဘူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးက ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ထမီ ၀တ်ထား တာ ကို နောက်နေ သလို ပဲ။ (AP/Photo Khin Maung Win)
ဓာတ်ပုံ များ ဗီဒီယိုများ ကို ဆက်လက် ကြည့်ရှုရန် Kid Cudi ( Three Grammy Nod)
ကမ္ဘာ့ ဖလား ပွဲ တုန်း က နာမည်ကြီး ခဲ့တဲ့ Kannan လည်း ဂရမ်မီ ဆုပေးပွဲမှာဖျော်ဖြေမယ်
မိုးဟေကို ရဲ့ ချစ်သူများ နေ့ ဖက်ရှင် photo-myanmarcelebrity န၀ရတ် ရဲ့ ဖက်ရှင် ခောတ် စား နေ တဲ့ ဖက် ရှင် စတိုင်
အခုခောတ်စား နေတဲ့ Aviator မျက်မှန် လေး တစ်လက်လောက် ချစ်သူ ကို ၀ယ်ပေး ဒါမှ အချစ်တွေ ရ့မယ်။ Dolce & Gabana ဒါမှမဟုတ် Giorgio Armani တစ်လက် ကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ ကျော် က နေ လေးရာ ကျော် ရှိ တယ်။ ပေါချောင်း ကောင်း လိုချင် ရင် တော့ ဖရေဇာ မှ ညဘက် ချရောင်းတာ တစ်လက် လောက် ၀ယ်ပေးလိုက် ။
ဂျနီဖာ အနစ္စတန် ရဲ့ ဖက်ရှင် Aviator မျက်မှန် နဲ့ လှနေ တဲ့ ကင်ကာဒီရှန်း
သင့်ချစ် သူ စတိုင် ကျကျ လှနေ ဖို့ ဆိုရင် ကြောင်လျှာ သီး ကောင်းကောင်း လေးတွေ ရှိမှ သင်လဲ အထွဋ်အထိပ် ဖြစ်မယ်။ ဒီကြောင်လျှာ သီး က ဈေးကြီး တယ် သန်းရွှေ တပ်တဲ့ ကြောင်လျှာ လို မောင်သောင်းဆီ မှာ အပ်တာ မဟုတ် ဘူး ၊ဒေါ်လာ နှစ်ရာ ကျော်တယ်။
ဒေါက်တာ မာတင် ဖိနပ် နဲ့ လှနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတွေ ခောတ်စားနေတဲ့ စကတ် ဒီဇိုင်း Related Articles
Kid Cudi Readying New Wizard Album, Mixtape, Film (mtv.com)
Grammy Awards 2011: Eminem’s 10 Nominations Lead Field (huffingtonpost.com)
Eminem’s Grammy-Nominated ‘Love The Way You Lie’: How Did It Happen? (mtv.com)
Go behind the scenes at the Grammys, starting today (youtube-global.blogspot.com)
“Kid Cudi & Dot Da Genius Announce Wizard Singles” and related posts (datnewcudi.com)
Which Grammy Performance Are You Most Excited to See Tonight? (popsugar.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Tags: 53rd Grammy Awards, Arts, Eminem, Grammy Award, Kid Cudi, Lady Gaga, Relationships, Romance	From: ဖက်ရှင်, လူငယ်ရေးရာ, ဖျော်ဖြေရေး, ပြည်ပသတင်း	← ယီမင် ဆန္ဒပြသူများ သမ္မတ အိမ်တော် ကို ၀ိုင်းပြီ
အီဂျစ် စပ်တပ် ကလွှတ်တော် ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ခြောက်လ အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည် ဟု ကြေငြာ →
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,679 hits